Ciidamo ka soo goostay Puntland oo Somaliland ku biiray – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gobolka Sool ayaa waxaa lagu soo bandhigay Saraakiil ciidan iyo gaadiid dagaao oo la sheegay in ay ka soo goosteen maamulka Puntland,waxaana halkaasi ku soo bandhigay maamulka Somaliland.
Gashaanle Dhexe Ibraahim Ashkay oo ah Abaanduulahay Qeybta 7 aad ee Ciidanka Somaliland ee jooga gobolka Sool ayaa waxa uu sheegay in Ciidamadan ka soo goostay Puntland ee ku soo biiray Somaliland ay soo dhaweynayaan,isla markaana sheegay in ay qeyb ka noqon doonaan Somaliland.
Dhinaca kale Warbaahinta waxaa Gobolka Sool ku hadlay saraakiishii hogaaminaysay Ciidamadii ka soo baxay maamulka Puntland ee ku biiray Somaliland,kuwaasi oo sheegay in ay la shaqeyn doonaan Ciidamada Somaliland,ayna ka howl geli doonaan Gobolka Sool.
“Annaga oo ka nimid God qaboobe, waan soo wareegnay, meeshaas dadka jooga waxaan leenahay waa idin la qalday, haka waantoobaan, dadkeena iyo dalkeena ayaanu soo aadnay, waana ogaanay inaanu meeshaas waxba ka jirin”. Ayuu yiri mid kamid ah saraalka u hadlay Ciidanka soo goostay Puntland.
Maamulka Somaliland ayaa sheegay in dagaalka ka dhanka ah Puntland ee ka socda Gobolada Sool iyo sanaag ay soo afgari doonaan.
Sawirro:-Soomaaliya iyo Japan oo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga